Inona avy ireo governemanta afaka manatsara ny fizahantany ara-pahasalamana? Feo afrikanina manana vina manerantany
Home » Travel Associations News » Inona avy ireo governemanta afaka manatsara ny fizahantany ara-pahasalamana? Feo afrikanina manana vina manerantany
Jona 8, 2017
Ny Kongresin'ny fizahan-tany momba ny fahasalamana Pan Afrika dia mivory ao amin'ny Umfolozi izao Resort Resort Hotel Casino any Empangen, Kwa-Zulu Natal any Afrika Atsimo.
Ny minisitry ny fizahantany sy fandraisam-bahiny miteny avy any Zimbabwe, Dr. Walter Mzembi no iray amin'ireo kintana tamin'ity hetsika ity. Manome ny fomba fijeriny manerantany momba ny fizahantany momba ny fahasalamana izy ary manazava ny fomba mahatafiditra an'i Afrika. Vao haingana i Mzembi no nifaninana tamin'ny toeran'ny Firenena Mikambana momba ny fizahan-tany ho an'ny sekretera jeneraly ary nanao ny laharana faharoa tamin'ny tolo-kevitry ny Filan-kevitry ny UNWTO.
Ity ny famelabelarany, style Mzembi:
Fahatakarana ny fizahantany ara-pahasalamana
Ny fizahan-tany ara-pitsaboana dia ny dia ataon'ny olona mitady fitsaboana izay:
Tsy misy any amin'ny firenena niaviany,
tsy takatry ny saina - noho ny vidin'ny fitsaboana be loatra na
Proscribed amin'ny rafitra fitsaboana ara-pahasalamana ao an-trano - midika hoe (proscribed) ny fomba fitsaboana sasany dia tsy omena noho ny fiheverana ny etika sy ny etika.
Tsy fisian'ny teknolojia fitsaboana sahaza, ary
Fahafahana tsy mitovy amin'ny fitsaboana tsara.
Tsenan'ny fizahantany momba ny fahasalamana manerantany dia mitombo amin'ny taha 15-25 isan-jato miteraka fidiram-bola eo anelanelan'ny 38 USD ka hatramin'ny $ 55 miliara
Raha ny momba an'i Zimbabwe, ny Fanjakana Mitambatra dia nandritra ny taona maro no toerana tian'ny safidy ho an'ireo izay mitady fitsaharana amin'ny aloky ny aretina.
Nisy fiovana seismika izao. Inde sy Singapour, dia lasa nisafidy farany indrindra indrindra amin'ny sehatry ny famindrana voa, ny aretin'ny maso, ny fitsaboana ny fo ary ny famindrana ny aty.
Nanatevin-daharana ny ligy i Afrika Atsimo niaraka tamin'i Morningside sy hopitaly Chris Bernard naneno mafy toy ny mpitsidika notsidihinay indrindra, ary hopitaly sy ivon-toerana manampahaizana manokana.
Tamin'ny taona 2014 fotsiny, ny Masoivohon'i India tao Harare dia namoaka visa ara-pitsaboana 259 ho an'ny Zimbaboeana sy visa mpitsabo 267 - izay natambatra tao dia misy io 'effet roa sosona' io amin'ireo olona mitsidika ary voaray ho fidiram-bolan'ny fizahan-tany aloha izy ireo ary mahafeno fepetra hitsidika ny fitsaboana. antony 'amin'ny tranga faharoa. Midika izany fa betsaka kokoa ny olona mety mitsidika isaky ny olona mitsidika noho ny antony ara-pitsaboana. India dia nahazo $ 3 miliara dolara tamin'ny taona 2016 ary antenaina hahatratra 7-8 miliara amin'ny taona 2020 avy amin'ny fizahan-tany ara-pahasalamana (Araka ny Fanoloran-kevitra momba ny fizahantany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any India-Grant Thornton, tatitra momba ny fanombanana 2016).
Ireo mpizahatany ara-pahasalamana afrikanina any India dia nahatratra 34% izay mihoatra ny 1 miliara amin'ny fandaniana tanteraka any India.
INONA NO AZON'NY MPITONDRA atao? Famaritana lehibe momba ny rojom-pitsaboana fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany
Manana teboka 5 hanasongadinana ity fomba fijery ity aho:
Fandrosoan'ny Fotodrafitrasa fizahantany ara-pahasalamana isaky ny dingana amin'ny rojom-bidy.
Ny fananganana fotodrafitrasa dia zava-dehibe ary mazàna, ny famporisihana dia zava-dehibe hanentanana ny fampandrosoana fotodrafitrasa toy ny fanomezana tany maimaim-poana ho an'ny fotodrafitrasa fizahan-tany momba ny fizahantany. Any Zimbabwe, ny governemanta dia nanolotra tany any Victoria Falls sy ireo tanàna hafa izay eo ambanin'ny faritra ara-toekarena manokana miaraka amin'ireo tombony azo avy aminy toy ny fanefana haba. Manasa ireo mpampiasa vola amin'ity faritra ity aho.
Manome fotoana lehibe toy izao ny rojom-pitsaboana momba ny fizahantany momba ny fizahantany:
Ny governemanta dia afaka mifantoka amin'ny fanapahan-kevitra momba ny politika fampiakarana ny kalitaon'ny Fikarakarana ara-pahasalamana izay manetsiketsika ny sain'ny vahiny ihany fa ny olona eo an-toerana ihany koa g Nahavita nahavita an'io i Singapore ary mahazo tombony amin'ny fampiasam-bolany izao ny firenena.
Ny isan'ireo marary vahiny voatsabo tany Singapour dia nitombo hatramin'ny 200,000 ka hatramin'ny 400,000 teo anelanelan'ny 2002 sy 2005, an fitomboan'ny 20 isan-jato mahery isan-taona. Nampitomboin'ny governemanta ny isan'ny vahiny tonga tany Singapore hanasitranana 1 tapitrisa tamin'ny 2012. Ny valisoa noho io fiakaran'ny fizahan-tany ara-pahasalamana io, hoy izy, dia vola mitentina 3 miliara dolara isan-taona ary asa vaovao 13,000 no noforonina.
Mamporisika ny fanitarana ny serivisy fitsaboana manokana.
Fanofanana momba ny fahasalamana mpiasa ohatra: I Cuba dia manana mpiasa 37,000 miasa any amin'ny firenena 102, mandrafitra ny 52% amin'ny fitambaran'izao tontolo izao - and ny mpiasan'izy ireo dia miteraka fifanakalozana vahiny mitentina 8 miliara dolara isan-taona. Ny fitaovan-dry zareo dia sasany amin'ireo tsara indrindra ary nahasarika olona betsaka tahaka ny mpilalao baolina kitra Arzantina Diego Maradona, nitady fitsaboana amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina tamin'ny taona 2000, ny filoha teo aloha Ekoadaoro Rafael Correa, ary ny fahatsiarovanao, Hugo Chavez avy any Venezoela, dia nandany ny volana farany niadiana tamin'ny homamiadana teo ambanin'ny fikarakarana ireo onkolojiana kiobanina amin'ny taona 2012-2013. Kiobà manokana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana izay misy ny famerenana amin'ny laoniny zava-mahadomelina sy alikaola, fandidiana maso, orthopedika, fandidiana fo, dermatolojia, neurolojia ary fandidiana kosmetika.
Ivotoerana fizahantany mpitsabo manokanag "Singapore Medicine", tamin'ny taona 2003 dia nanomboka fiaraha-miasa teo amin'ny governemanta sy ny indostria, ary novinavinaina ny drafitra niniana natao mba hamadihana ny renivohitra ho toy ny foibem-pitsaboana mitarika faritany, ka avela any aoriana any Thailand sy India.
Marketing synergistic - Manampahefana misahana ny fizahan-tany satria ny fanapahan-kevitra momba ny politika dia tokony hiara-hiasa ary hifantoka amin'ny varotra ataon'izy ireo koa ireo serivisy miompana amin'ny mpitsabo miaraka amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana.
Inona no azon'ny fizahan-tany mpitsabo arahin'antoka?
Vato fitokisana amin'ny rafi-pahasalamana eto amin'ny firenena - tsara ho an'ny marika amin'ny firenena ary hampiakatra ny lazan'ny firenena amin'ny fifaninanana.
Manery ny firenena hampitombo ny fahombiazan'ny fitaterana fahasalamana ho tombontsoa ho an'ny fidirana anatiny (fifindra-monina ara-pitsaboana misy olona cross-sisintany toy ny hetsika vonjimaika mankany amin'ny firenena vahiny hikarakara fitsaboana) ary ny fifindra-monina mivoaka (mpitsara ny hetsika vonjimaika avy firenena vahiny handray fitsaboana).
Ny fizahantany ara-pahasalamana dia nanjary ampahany amin'ny diplaomasia - noho ny fifamatoran'ny olona sy ny fifanakalozana izay manome fahatakarana iraisana eo amin'ny olona sy ny firenena.
Ny tanjona fizahan-tany ara-pahasalamana dia novolavolaina indrindra noho ny antony ara-toekarena. Ny toerana itodiana samy hafa dia manolotra tolo-kevitra sanda tokana amin'ny fisarihana an'io tsena manambola sy mitombo io.
Ireo mpivarotra fizahantany fizahan-tany ara-pahasalamana dia tokony hanome lanja bebe kokoa ny fampidirana ny serivisy ara-pitsaboana, fizahan-tany ary ny fahasalamana mba hivoatra amin'ny fizahan-tany ara-pitsaboana amin'ny ankapobeny. Ny mpizahatany ara-pahasalamana dia mitaky sandam-bola, mitady teknolojia fitsaboana manahirana, fotodrafitrasa manara-penitra, fanafody mahomby, serivisy fitsaboana feno, ary serivisy mpitsabo arak'ireo mpitsabo no tsy misy marimaritra iraisana mandroso.
Nahita vatana mangatsiaka ny mpamonjy voina rehefa nikaroka ny fiaramanidina Myanmar nianjera
Fihaonana an-tampon'ny UNWTO ho an'ny Amerika: Teknolojia amin'ny fizahan-tany